एक मृत आमा को लागी प्रार्थना। ? र मृतक | छोटो
एक मृत आमा को लागी प्रार्थना यसले हामीलाई त्यस्तो डरलाग्दो समयमा हामीलाई चाहिने सान्त्वना प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
एक आमा गुमाउनु एउटा सब भन्दा कडा पीडा हो जुन एक मानवले महसुस गर्न सक्दछ किनभने उसले आफूलाई आफूलाई जीवन दिने व्यक्तिको लागि हराइरहेको छ, जसले उसलाई आफ्नो जीवनमा मार्गदर्शन र साथ दिए। यो दु: ख हो जुन पार गर्न गाह्रो छ, तर आत्मिक मद्दतले जुन प्रार्थनाले देखाउँदछ, यो चाँडो हुन सक्छ।
यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रार्थना हो जुन हामीले सोच्न वा कहिल्यै पनि आवश्यक पारेनौं भने पनि सत्य भनेको यो हो कि हामीलाई कुन क्षणमा यो प्रार्थना गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ।
त्यसकारण एकटोलिक विश्वासमा, त्यहाँ विस्तृत र सटीक वाक्यहरू छन् जुन हामी परिस्थितिको सामना गर्दैछौं जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सक्छौं।
1 एक मृतक आमाका लागि प्रार्थना यो के हो?
2 १) छोटो मृतक आमाको लागि प्रार्थना
3 २) मृतक आमाका लागि प्रार्थना
4 )) स्वर्गमा मेरी आमालाई प्रार्थना गर्नुहोस्
4.1 म कहिले प्रार्थना गर्न सक्छु?
एक मृतक आमाका लागि प्रार्थना यो के हो?
यो प्रार्थनाको धेरै उद्देश्यहरू हुन सक्छन्, ती मध्ये एउटा प्रार्थनाको बीचमा फेला पार्न सक्षम हुनु, हामीलाई चाहिने सान्त्वना, अर्को उद्देश्य र सायद धेरै शक्ति प्राप्त गर्ने त्यो अर्को आयामको साथ केही कुराकानी स्थापित गर्न सक्षम हुनु हो, यसले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ कि आमा जत्तिकै मीठो र मायालु हुनु स्वर्गीय स्थानहरूमा छ, शान्तिमा आराम गर्दै र आनन्द लिइरहेको छ। परमेश्वरसामु सही जीवन बिताउँदा हुने फाइदाहरू।
अर्को उद्देश्य भनेको एउटी आमाको खुशीलाई धन्यबाद दिन र उसको अनन्त आरामको लागि अनुरोध गर्नु हो। यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो हाम्रो प्रार्थनाले हाम्रो परिवारको सदस्यलाई पछाडि उज्यालो पाउन लगाइरहेको छ भन्ने थाहा पाएर आफैलाई शान्तिको अनुभूति गर्ने बाटो हो मृत्यु.
१) छोटो मृतक आमाको लागि प्रार्थना
Jesus प्रभु येशू ख्रीष्ट, भगवान का पुत्र, जो पृथ्वी मा आमा, भर्जिन मरियम चाहन्थिन्; आफ्नो सेवक एन मा दयालु आँखा संग हेर्नुहोस् ..., जसलाई तपाइँ हाम्रो परिवार को छाती बाट बोलाउनुभएको छ।
र गुवादालुपको सेन्ट मेरीको बिन्तीबाट, हामीलाई माया गरिरहनका लागि स्वर्गमा सधैं हाम्रो लागि रहेको प्रेमलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, र स्वर्गबाट ​​गर्नुहोस्। तपाईंको कृपायुक्त सुरक्षा अन्तर्गत तिनीहरू जसलाई उसले पृथ्वीमा छोड्नुपर्दछ। तपाईं जो बाच्नुहुन्छ र सदा-सदाको लागि शासन गर्नुहुन्छ।
सामान्यतया, छोटो मृतक आमाको लागि प्रार्थनाहरू सबैभन्दा सुन्दर हुन्छन्।
हामीसँग हाल धेरै प्रार्थना मोडेलहरू छन् र यति धेरै विकल्पहरू मध्ये एक हुन् याद गर्न सजिलो छोटो छोटो वाक्य र हामी सबै समयमा के गर्न सक्दछौं।
एकाकीपनको अवस्थामा कहिलेकाहीं हामी एक्लो रहन र आफ्नो प्रियजनको सम्झना गर्न ओमेन्टो खर्च गर्न चाहन्छौं, ती क्षणहरूमा यी प्रार्थनाहरूमध्ये एउटालाई उठाउन सक्षम हुनु महत्त्वपूर्ण छ जसलाई धेरै समय चाहिदैन तर त्यसले हामीलाई उदासीमाथि विजय पाउन र भेट्टाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। शान्ति र शान्ति जुन केवल भगवान्को छेउमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
२) मृतक आमाका लागि प्रार्थना
«ओह मेरी आमा, म त्यो भन्न चाहन्छु
तपाईं मेरो जीवनको मार्गनिर्देशक र उत्तर हुनुहुन्थ्यो,
धन्यबाद हामी यस संसारमा छौं,
धन्यबाद जसले हामीलाई अस्तित्व दिनुभयो,
धन्यबाद जसले हामीलाई शिक्षित गर्नुभयो,
धन्यबाद हामी हामी हौं के छौं,
तपाईं छोडिनुभयो, तपाईं स्वर्ग जानुभयो,
तपाईंले जीवनमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुभयो,
तपाईंले छिमेकी र खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुभयो,
जहिले पनि सावधान र सबै कुराको सचेत,
कसरी यति धेरै सुन्दर चीजहरु, आफ्नो आवाज, आफ्नो हाँसो बिर्सन ...
आज मेरो बुबा, म तपाईंलाई सोध्छु
मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्
र मेरो प्रार्थनाको आवाजमा ध्यान दिनुहोस्,
मलाई मेरी आमालाई बाटो देखाउनुहोस्
कि उहाँ तपाईंको पक्षमा प्रभु हुनुहुन्छ,
उनलाई स्वर्गको राज्यमा आराम गर्न लैजानुहोस्।
मेरी आमा, उनको चिहान मा एक फूल सुकिन्छ
तपाईको मेमोरीमा फाड आउँछ
तपाईंको प्राणको लागि प्रार्थना, भगवानले यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ।
सदाको लागि उनको लागि ज्योति चम्किन्छ, उनी शान्त रहन सक्छ।
के तपाईंलाई मृतक आमाको लागि यो कडा प्रार्थना मनपर्‍यो?
आमाहरू मिठाई र प्रेमले भरिएका हुन्छन् जसले उनीहरूका बच्चाहरूको भलाइ सुनिश्चित गर्दछ। अनुकरणीय आमाको उदाहरण हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटै आमा हुनुहुन्छ, जुन पवित्र आत्माले भरिएको छ र जसले आफ्नो छोरालाई कसरी प्रेम गर्ने र कसरी स्वीकार्ने भनेर जान्नुहुन्थ्यो।
को आमाहरू हरेक व्यक्तिको दाखको महत्त्वपूर्ण भाग हुन्छन् र जब सृष्टिकर्तासँगको यो अंशले शून्यता छोड्दछ जुन केवल प्रार्थनाले भरिन्छ हामी यो सोच्दछौं कि उहाँ आफै पनि आफ्ना बच्चाहरूको हेरचाहमा भगवानको साथ हुनुहुन्छ।
)) स्वर्गमा मेरी आमालाई प्रार्थना गर्नुहोस्
«हे बुबा, पीडाको अनन्त क्षणहरूमा मात्र सान्त्वना।
हामी तपाईंको अनुपस्थितिमा शोक गर्दछु, प्रिय आमा, यस दुखको पलमा,
धेरै दु: ख, धेरै पीडा, तपाईं हाम्रो हृदय मा एक ठूलो खालीपन छोड्नुहुन्छ,
Lord, your him him him him him him him him him him him him him him Lord him Lord him him Lord him Lord him him Lord Lord Lord Lord Lord him Lord Lord Lord Lord Lord Lord him Lord Lord him Lord him Lord him Lord him him him him him him him him Lord Lord him him him Lord him Lord Lord Lord Lord Lord him Lord Lord him him him Lord Lord him him him him हे प्रभु, तपाईका पापहरूको क्षमा गर्नुहोस्, मृत्युको ढोकाबाट भित्र पस्नु।
तपाईंको प्रकाश र अनन्त शान्तिको आनन्द लिनुहोस्।
सर्वशक्तिमान ईश्वर, हामी तपाईंको मायालु हातहरूमा राख्छौं। हाम्रो आमा, जो यस जीवन मा तपाईंलाई संग राख्न बोलाइएको थियो। उसलाई स्वर्गमा अनन्त आत्मा प्रदान गर्नुहोस्। मेरी आमा, म भन्न चाहान्छु कि तपाईं मेरो बलको उत्तर दिशा निर्देशक हुनुहुन्थ्यो,
हामी तपाईलाई यस संसारमा धन्यबाद दिन्छौं, धन्यबाद जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो,
धन्यबाद जसले हामीलाई शिक्षित गर्नुभयो, धन्यबाद हामी हौं हामी के हौं,
र तपाईलाई धन्यबाद दिन्छु म सधैं राम्रो मानिस बन्नेछु तपाईले छोडेर जानु भयो, तपाई स्वर्ग जानुभयो,
तपाईंले पृथ्वीमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुभयो, अरूलाई र खाँचोमा परेकाहरूलाई सहायता गर्नुभयो,
सँधै सावधान र सबै चीजको बारे सचेत, यस्तै धेरै सुन्दर चीजहरूलाई बेवास्ता, तपाईंको आवाज, तपाईंको मुस्कान ...
आज मेरो बुबा, म तपाईंलाई ठूलो नम्रताका साथ सोध्छु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्
र मेरो प्रार्थनाको आवाजमा ध्यान दिनुहोस्, मेरी आमालाई मार्ग देखाउनुहोस्,
तपाईंको पक्षमा हुन प्रभु, उनलाई स्वर्गको राज्यमा आराम गर्न लैजानुहोस्।
मेरी आमा, उनको चिहान मा एक फूल सुक्खा, तपाईंको स्मृति मा एक आँसु बाफ हुन्छ
तपाईंको प्राणको लागि प्रार्थना, भगवानले यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईको लागि सदाको लागि ज्योति चम्किन सक्छ, तपाई शान्तिमा रहन सक्नुहुन्छ।
स्वर्गमा मेरो मृतक आमालाई हामी यो प्रार्थनालाई धेरै माया गर्छौं।
एक आमा एक साथी हो तपाईं कुनै पनि समयमा जान सक्नुहुनेछ, चाहे तपाईं कति नराम्रो बच्चाहरू हुनुभयो, आमाहरूसँग आफ्ना बच्चाहरूलाई स्वागत गर्न सधै खुला हात हुन्छ।
जब यी आमाहरू स्वर्गमा भेला हुन्छन्, तिनीहरू मायालु रहन्छन् र हाम्रो कुरा सुन्न तयार हुन्छन्, हामीलाई मद्दत गर्छन् र हामीलाई मार्गनिर्देशन जारी राख्छन्।
आखिरमा हामी बुझ्दछौं कि एउटै प्रभु परमेश्वर पिताको छेउमा आमाको लागि अर्को उत्तम ठाउँ अरू छैन।
प्रार्थनाहरू जहिले पनि गर्न सकिन्छ।
यो आवाज उठाउन वा मैनबत्तीहरू जलाउनु आवश्यक छैन, तर हामी हृदयबाट प्रार्थना गर्न सक्छौं र प्रार्थना निष्कपट हुन सक्छ। थप रूपमा तपाईसँग हुनु पर्ने विश्वास भनेको जीवित र जागा रहनु हो हाम्रो प्रार्थना उनीहरू कहाँ जाने छन् त्यहाँ पुग्नुहोस्।
मैनबत्तीहरू, ठाउँ, यदि हामी यसलाई कम, उच्च आवाजमा वा हाम्रो दिमागमा गर्छौं, केवल विवरणहरू मात्र हुन् जुन हामी यो क्षणमा देख्न सक्छौं, तर कुनै पनि अवस्थामा प्रार्थनाहरू सँधै गर्न सकिन्छ।
धेरै माया संग एक मृतक आमा को लागी प्रार्थना गर्नुहोस्।